Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Waxabajjii 21, 2018 fi Oduu Amee – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooSagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Waxabajjii 21, 2018 fi Oduu Amee
Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Waxabajjii 21, 2018
ONN: Oduu Ammee, Injifannoo WBO, Waxabajjii 21, 2018
Gootichii WBO Godina Gujii Bahaa keessa socho’u guyyaa har’aa Waxabajjii 21, 2018 humna waraana diinaa gara iddoo qubsuma ishee Ona Gooroo Doolaa, bakka qubsuma ishee magaalaa Jiddoolatti adeemaa jirtu irratti tarkaanfii laalessaa fudhatee loltootni diinaa namni kudhanii lama (12) yammuu ajjeefaman, madoon gara nama kudhanii ol ta’uu ummatni naannichaa nuuf dhaamanii jiru. Humni diinaa yeroo tarkaanfiin kun irratti fudhatametti konkolaataa lama wal duraaf duubaan adeemaa kan turan yammuu ta’u haxxee hidhuudhaan haleellaan laalessaan irratti fudhatamuun konkolaataan fuula dura adeemu erga nagaadhaan dabarfamee booda konkolaataa boodarraan deemaa ture irratti xiyyeeffatuun gaaga’ama ol aanaa irraan gahamee akka jiru gabaafamee jira.
Waraanni Wayyaanee Goninoota Gujii Bahaa fi Dhihaa keessa qubatee jiru ummata Oromoo nagaa yakka tokko malee ajjeessuun goolessaa akka jiru Oromia News Network deddeebisee gabaasaa turuun ni yaadatama.
Muummichi Minesteeraa Wayyaanee Dr. Abiyyi Ahmad dheengadda paarlaamaa Wayyaanee irratti yammuu dubbatu “Waraanni Kan faashinni isaa itti darbe dha; kottaa karaa nagaa qabsaa’aa” jechuudhaan jaarmaalee akka Adda Bilisummaa Oromoo, Adda Bilisummaa Biyyoolessa Ogaaden fi Ginbot-7 akka biyyatti galanii qabsaa’an waamicha taasisuun kan yaadatamu yammuu ta’u, yeroo amma kanatti waraanni Wayyaanee ammoo Oromiyaa keessatti bobba’ee ummata Oromoo Gujii, Booranaa, Harargee fi Wallaggaa goolessuutti bobba’ee akka argamu gabaafamaa jira.
Hordoftoota keenyaa babal’ina Oduu kanaa hordofnee kan isiniif dhiheessinu ta’a.
*Suuraan Faayila keenyarraa ti.
Gareen hidhamtootaa mana hidhaa Wayyaaneerraa hiikaman kanneen akka Masfin Abbabaa fi Kaffaaloo Tafarraa kan keessatti argaman guyyaa har’a Waxabajjii 21, 2018 awwaala Waahila isaanii Tasfaahun Camadaa kan mana hidhaa keessatti wareegame daawwachuuf akkasumas abaaboo kaa’uuf gara Godina Harroo Guduruu Wallaggaa aanaa Guduruu, Ganda Harbuutti kan argamu Waldaa Makaanayyasuus deemuuf yammuutti jiru. Ummanni Godina Horroo Guduruu Wallaggaa, keessattuu ummanni magaalaalee Finca’aa fi Shaambuu simannaa ho’aa godhaaf jedhamee eegama.